Akụkọ Bible: Site n’Okike Ihe Ruo n’Iju Mmiri - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ebee ka eluigwe na ala si pụta? Olee otú anyanwụ, ọnwa, kpakpando na ọtụtụ ihe ndị dị n’ụwa si bịa dịrị? Bible na-enye azịza bụ́ eziokwu mgbe ọ sịrị na ọ bụ Chineke kere ha. N’ihi ya, akwụkwọ anyị a na-amalite site n’ịkọ akụkọ Bible banyere okike ihe.
Anyị mụtara na ihe mbụ Chineke kere bụ ndị mmụọ yitụrụ ya. Ha bụ ndị mmụọ ozi. Ma e kere ụwa maka ụmụ mmadụ dị ka anyị. Chineke kere nwoke na nwaanyị, ndị a kpọrọ Adam na Iv, wee debe ha n’ogige mara mma. Ma ha nupụụrụ Chineke isi, ha wee tụfuo ohere nke ịdịrị ndụ gaa n’ihu.
Afọ niile ahụ, site mgbe e kere Adam ruo n’oké Iju Mmiri ahụ, dị otu puku afọ, narị afọ isii na iri ise na isii. N’oge ahụ, ọtụtụ ndị ajọ mmadụ bi n’ụwa. N’eluigwe, e nwere ndị bụ́ mmụọ a na-adịghị ahụ anya, Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya. N’ụwa, e nwere Ken na ọtụtụ ndị ọjọọ ndị ọzọ, tinyere ndị dike pụrụ iche. Ma e nwekwara ndị ezi mmadụ n’ụwa—Ebel, Ịnọk, na Noa. Ná NKEBI NKE 1 nke a, anyị ga-agụ banyere ndị a niile na banyere ihe ndị merenụ.